SONGZ Isi | Ikuku oyi Songz Automobile Air Co., Ltd.
SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTDnke a kpọrọ aha SONGZ, hiwere na 1998. Ọ bụ ụlọ ọrụ nkwonkwo ngwaahịa na-ahụ maka nyocha, mmepe, nrụpụta na ire ahịa nke usoro ikuku ikuku ụgbọ. Edere ya nke ọma na Shenzhen Stock Exchange na 2010. Mkpokọ ngwaahịa: SONGZ, koodu ngwaahịa: 002454. Nke a mere SONGZ ụlọ ọrụ edepụtara nke izizi na ụlọ ọrụ ụgbọ njem ụgbọ njem China. SONGZ na-etinye onwe ya na sistemụ ikuku ikuku dị ka akara kachasị elu ma bụrụ onye na-azụ ahịa klaasị na usoro nka na nhazi ụlọ n'ime nso nso.
ABG azụmahịa ekpuchi electric na ot nnukwu na-ajụ-sized ụgbọ ala ikuku conditioner, njem ụgbọ ala ikuku conditioner, okporo ígwè n'ụzọ ikuku conditioner, gwongworo friji nkeji, electric Compressor, na ụgbọala ikuku conditioner akụkụ ahụ mapụtara.
SONGZ Isi azụmahịa isii
SONGZ n'ichepụta ihe
Site na ntọala 13, SONGZ ehiwela ntọala nke hiwere isi na Shanghai, China ma dabere na Finland, Indonesia na China na Anhui, Chongqing, Wuhan, Liuzhou, Chengdu, Beijing, Xiamen, Suzhou na obodo ndị ọzọ. Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ were karịa 3,000.
E nyegoro ngwaahịa ntụ ụgbọ ụgbọ ala SONGZ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nrụpụta bọs niile na China, dịka Yutong, BYD, Golden Dragon, Zhongtong, na wdg. A na-ebupụ ngwaahịa ndị a karịa mba 40, gụnyere mba Europe dịka Russia, England, Italy, na mba Nordic, mba America dịka Mexico, Brazil, Chile, Colombia, na Ecuador, mba Eshia dịka Japan, South Korea, India, Malaysia, Indonesia, Thailand na Vietnam, ma zigakwara Australia na New Zealand.
N'otu oge ahụ, anyị enwetawo ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ahịa ahịa na mpaghara azụmahịa nke ụgbọ ala ụgbọ elu ụgbọ elu, ụgbọ okporo ígwè na-ebugharị ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ mmiri friji.
SONGZ Isi Ndị Ahịa nke Nrụpụta Bus
Ngwaahịa a ghọtara nke ọma site ahịa n'ụlọ na mba ọzọ na elu àgwà ụkpụrụ dị ka ike ịzọpụta, gburugburu ebe obibi nchebe, nchekwa, ala mkpọtụ, nkasi obi, na ìhè arọ.
SONGZ na-agbaso usoro atụmatụ "arụmọrụ, nchekwa na nchekwa na gburugburu ebe obibi" yana echiche ahịa ahịa teknụzụ "teknụzụ dị elu, ogo dị elu, ọrụ dị elu", kpebisie ike ịbụ ọkachamara n'ọkwa njikwa ụgbọ ala ụwa.
SONGZ ikike imepụta ihe
SONGZ na-ewebata ngwa ọrụ ọgụgụ isi na usoro ihe ọmụma iji hụ na mmepụta arụmọrụ, nkwụsi ike na izi ezi.
Ngwa akụrụngwa dị ka akara igwe na-arụ ọrụ zuru ezu / usoro mgbakọ, akara ammonia akpaka, usoro nhazi akpaka nke efere dị ike na nke na-agbanwe agbanwe, igwe dị oke ọsọ, igwe na-ekpo ọkụ argon arc, igwe ọkụ ọkụ na igwe ịgbado ọkụ na-eme ka mmepụta ahụ dịkwuo mma. arụmọrụ.
SONGZ jikọtara akụrụngwa na ozi yana Informatization na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma na-ewulite ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi site na iji usoro ihe ọmụma dị ka ERP, MES na WMS.
Akpaka Achọpụta Amonia
Akwa-agba Fin Machine
Automatic Argon Arc ịgbado ọkụ Machine
Ogwe aka Robot
Na oge nke Industrylọ Ọrụ nke 4.0, SONGZ na-arụsi ọrụ ike na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu, na-eme ka ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi mepụta, na -emepụta ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ ndị nwere ọgụgụ isi, na-eme ka njikwa usoro mmepụta nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, na-eme ka njikwa mmepụta ihe ọmụma dabere, akpaghị aka, dijitalụ na sayensị, na-emeziwanye mmepụta arụmọrụ, ma na-akwalite ụlọ ọrụ Ntupụta nrụpụta.
SONGZ Mmesi obi ike
Qualitykpụrụ Dị Mma: Mee ụkpụrụ usoro ma lekwasị anya na afọ ojuju ndị ahịa.
Nweta afọ ojuju ndị ahịa site na nyocha na nyocha na-aga n'ihu.
Amụma gburugburu ebe obibi: Nchedo gburugburu ebe obibi, nchekwa ọkụ na mbelata oriri, imegharị ihe, itinye aka na ya, ịkwado ọchịchị na mmụba na-aga n'ihu.
Amụma Ahụike na Nchedo Ọrụ: Ahụike kachasị, nchekwa mbụ, mgbochi sayensị, itinye aka zuru ezu, ntinye iwu na mmụba na-aga n'ihu.
SONGZ na-akwadoro TS16949 ma na-elekwasị anya na afọ ojuju ndị ahịa, itinye aka na njikwa mma. N'oge njikwa mma na-abata, SONGZ na-aga n'ihu na-ebuli atụmatụ nlele maka ntụkwasị obi ma na-aga n'ihu na-akwalite ngwaọrụ nyocha maka ntụkwasị obi nke nsonaazụ nnwale. SONGZ nwere ngwa nyocha 527 na-enyocha ngwa nyocha dịka MSA iji mezuo ihe ndị achọrọ. E wezụga nke ahụ, SONGZ na-ahụkwa ụdị ịdị n'otu nke ngwaahịa site na nyocha, njikarịcha na ọzụzụ nke ndị na-eweta ngwaahịa ma na-eburu nnwale nke atọ nke akụkụ dị iche iche kwa afọ iji hụ na usoro ikuku ikuku nwere arụmọrụ ma nwee ntụkwasị obi. N'oge njikwa usoro, SONGZ na-akwado itinye aka zuru oke, nyocha ibe, nyocha mbụ na nke ikpeazụ yana nyocha usoro niile. Maka usoro ndị isi, a na-anakwere ngwa ọrụ nnwale dị elu iji hụ na a pụrụ ịdabere na ngwaahịa yana akụrụngwa ammonia akpaka zuru oke ka akwadoro maka ikuku ikuku nke usoro ikuku. Atọ-na-na-otu akpaka nchekwa ule akụrụngwa na-adiaha ka afọ ju ndị chọrọ na ngwaahịa nchekwa. A na-eme nyocha zuru ezu iji hụ na nchekwa ngwaahịa na ntụkwasị obi. A na-enyocha usoro dị mkpa site na iji SPC iji hụ na nkwụsi ike ma na-enye data nyocha iji mee ka mma dị mma.
SONGZ nnabata ojiji nke ngwaahịa dabere na nzaghachi ahịa, n'ụzọ zuru oke na eziokwu na-egosipụta ọnọdụ zuru oke site na nyocha afọ ojuju, na-eme PDCA ma na-emeziwanye ngwaahịa a ka mma.
Akwụkwọ IRIS ISO / TS 22163: 2017
Ọkara ọkara ụlọ
Ugbo ala ule bench
SONGZ Na-asọpụrụ Mgbidi
Ebe ọ bụ na oruru na 1998, SONGZ meriwo afọ ojuju na otuto si ahịa anyị si China na mba ọzọ dị ka magburu onwe soplaya na ngwọta na-eweta nke ụgbọala ntụ oyi usoro.
Nke a kwesiri ịkọwapụta nke ọma na SONGZ jiri aka ya wee mepụta "Manufzụpụta Teknụzụ na Ngwa nke Micro Channel Tubes na Okpomọkụ Exchangers", na oru ngo ahụ meriri "National National Science and Technology Ọganihu nke Abụọ", nke bụ otuto kachasị elu site na Council Council nke China. n'ime ụlọ ọrụ ikuku ụgbọ ala.
SONGZ enwetakwala mmata site na ụlọ ọrụ ikuku ụgbọ ala na ọha mmadụ maka onyinye nke SONGZ mere maka mmepe nke teknụzụ na ụlọ ọrụ ikuku ikuku na ọrụ mmekọrịta nke SONGZ na-ewere.
Ezigbo soplaya maka CRRC, China
Magburu onwe Supplier maka Foton, China
Ezigbo ọkọnọ maka Hino, Philippines
Ezigbo soplaya maka SANY, China
Beijing Olympic Service onye mmeri
China National Science & Technology Ọganihu Award
Akwụkwọ nyocha nke CNAS Lab
Akwụkwọ nzere nke Laboratory nke ngwaahịa maka BYD
Kpụrụ Enterprise:Gbalịsie ike maka imeziwanye gburugburu ebe obibi mmadụ.
Ọhụụ ụlọ ọrụ:Bụrụ ụwa''s onye mbụ klaasị na-enye ikuku ikuku.
Iwu Nchịkwa:Afọ ndị ahịa, afọ ojuju ndị ọrụ, afọ ojuju nke ndị ahịa.
SONGZ Enterprise Omenala
Omenala bu nkpuru obi nke ihe omuma na echiche omenaala bu ikike anaghi ahu anya maka oru na njikwa. SONGZ agbasowo echiche ọdịnala nke "ndị mmadụ na-eche" ruo ọtụtụ afọ.
SONGZ na-enye ndị ọrụ niile nnukwu ọkwa, na-akpali ịnụ ọkụ n'obi ha n'ụzọ zuru oke, na -emepụta ma na-enye ha ohere ziri ezi ma nwee olileanya iso ha too.
SONGZ Otu Omenala Otu:
Ahịa Lekwasịrị Anya.
Imeghe & Di iche iche.
Eziokwu na Nraranye.
Dị mfe & Eziokwu.
SONGZ Otu Amamihe
Na-arụkọ ọrụ na Ezi Obi Eziokwu ma Na-elekwasị Anya na Ogologo Oge.
Ọ na-emekọ ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ site na ịrụkọ ọrụ ọnụ. SONGZ nwere ọkachamara ọkachamara na nke a pụrụ ịdabere na ya nke na-etolite na ụlọ ọrụ ma na-eduga ndị ọrụ iji mezuo ebumnuche ha site na njikọta siri ike, ikike nke ibu ọrụ na mmụọ siri ike enweghị ike.
Jiri obi ekele na-aga n’ihu, were owuwe ihe ubi wepụta ihe ubi.
SONGZ, Na - emepụta oge ọhụụ nke ikuku ikuku!